ဩစတေးလျနိုင်ငံတွင် တောမီးလောင်မှုကြောင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ပေါင်း ၃ ဘီလီယံကျော် သေဆုံး | Myanmar In Singapore
PARNDANA, AUSTRALIA – FEBRUARY 21: A koala affected by the recent bushfires is released back into native bushland following treatment at the Kangaroo Island Wildlife Park on February 21, 2020 in Parndana, Australia. The Kangaroo Island Wildlife Park owned by Sam and Dana Mitchell has treated 600 animals since the fires, 95% being koalas. Overathird of Kangaroo Island, including much of the Flinders Chase National Park, was burnt during the recent bushfires that started on4January. Two people lost their lives, while tens of thousands of native animals and farming livestock were also killed. The Wildlife, Ecosystems and Habitat Bushfire Recovery Taskforce estimates as many as 90 percent of Kangaroo Island’s famous koala population perished in the recent bushfires, with only 5,000 to 10,000 koalas remaining in the area from an original population of about 60,000. Kangaroo Island’s economy is reliant on agriculture and tourism – worth an estimated 180 million dollars – and focus is now turning to reviving the industries post the bushfires. The South Australian Tourism Commission launched the #BookThemOut campaign to encourage tourists to visit the bushfire affected areas in the Adelaide Hills and Kangaroo Island, with the recent Kangaroo Cup Racing Carnival reaching record attendance this past weekend. However, with the Island known to beapopular tourism destination for Chinese tourists the local industry is now also being heavily affected by coronavirus. The Federal Government has announcedaroyal commission into this summer’s devastating bushfires across Australia, withaspecific focus on preparedness for future bushfire seasons. Former Australian Defence Force (ADF) chief Mark Binskin, former Federal Court judge Annabelle Bennett and leading environmental lawyer Andrew Macintosh are due to deliver their findings by the end of August. (Photo by Lisa Maree Williams/Getty Images)
ဩစတေးလျနိုင်ငံတွင် တောမီးလောင်မှုကြောင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ပေါင်း ၃ ဘီလီယံကျော် သေဆုံး
သဘာဝတရားအတွက် ကမ္ဘာတောရိုင်းတိရစ္တာန်များ ရန်ပုံငွေအရ ကျောက်စိမ်းအရေအတွက် ၃ ဘီလီယံနီးပါးနှင့် သားဗိုက်ကောင်များ၊ ဩစတေးလျနိုင်ငံ၏ တခြားတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကို သေစေခဲ့ပြီး ဆယ်စုနှစ်အတွင်း လောင်ကျွမ်းခဲ့သော တောမီးကြောင့် ရွေ့ပြောင်းမှုများ ရှိခဲ့သည်။
ဤကြီးမားသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများမှ အများဆုံးထိခိုက်ခဲ့ရသည်မှာ ၂.၅ နီးပါးမှာ တွားသွားသတ္တဝါများဖြစ်သည်။ သန်း ၁၈၀ မှာ ငှက်များဖြစ်သည်။ ၁၄၃ သန်းမှာ နို့တိုက်သတ္တဝါများဖြစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှ ၂၀၂၀ မတ်လအထိ ဖြစ်ပွားခဲ့သော မီးလောင်မှုကြောင့် ဖားပေါင်း ၅၁ သန်းသေဆုံးခဲ့သည်။
ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ပရဟိတလုပ်ငန်း WWF ၏ နောက်ဆုံးကိန်းဂဏန်းသည် ၃.၃ ဘီလီယံခန့်ရှိပြီးမီးလောင်မှုအပြည့်အ၀ မပျောက်မှီက လုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ဖျက်ဆီးခံရသော နေရပ်ဒေသများကြောင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသော တိရိစ္ဆာန်များ ပါဝင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သူတို့သည် နောက်ပိုင်းတွင် အစားအစာနှင့်အမိုးအကာမရရှိခြင်း၊ သို့မဟုတ် နေရာချထားပြီးသော နေရပ်ဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအလားအလာများ ဖြစ်သည်။
တိရိစ္ဆာန်သေဆုံးမှုအရေအတွက် ခန့်မှန်းရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ သုတေသီများသည် ယခုအခါသြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ တောမီးကြောင့် သက်ရောက်မှုရှိသည့် ဒေသတစ်ခုလုံးကို အကဲဖြတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ လူပေါင်း ၃၄ ယောက်သေဆုံးခဲ့သည်။ ဧကပေါင်း ၃၇ သန်းကျယ်ဝန်းသည့် နေရာတွင် ရှိသော အိမ်ပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်ကို ဖျက်စီးလိုက်သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ ထက်ဝက်ကျော်ရှိသော ဩစတေးလျနိုင်ငံတောင်ဘက်အနှံ့အပြားတွင် ဖျက်စီးခံခဲ့ရသည်။
ဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ်မှ စီမံကိန်းခေါင်းဆောင် Lily van Eeden က တောမီးလောင်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော တိရိစ္ဆာန်များအား ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ သူမသည် အခြားတိုင်းပြည်များအား နေရာတိုင်းရှိ တောမီးလောင်ကျွမ်းမှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပိုမိုနားလည်စေရန် ဤသုတေသနအပေါ် တည်ဆောက်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ မိုးခေါင်မှုကြောင့် ချုံများသည် အထူးသဖြင့် ခြောက်သွေ့သောကြောင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ သမိုင်းတွင် အဆိုးရွားဆုံးတောမီးလောင်ကျွမ်းမှုကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် မီးသတ်သမားများက သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ လူဦးရေအထူထပ်ဆုံးဖြစ်သော နယူးဆောက်ဝေးလ်တွင်မီးလျှံများကို ထိန်းထားရန် ဖေဖော်ဝါရီလက ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ Credit: Sky News